Amanqaku kaDavid Finkelstein Martech Zone
Amanqaku ngu UDavid Finkelstein
UDavid Finkelstein nguvulindlela kwi-intanethi, usomashishini kwezobuchwephesha kunye nomsunguli weenkampani ezininzi ze-intanethi ezazisusela kwiintsuku zokuqala kwi-intanethi ngo-1994. I-BDEX, iqonga lokuqala kunye nelona likhulu lokutshintshiselana ngedatha yabathengi e-US
SkAdNetwork? Ubumfihlo beSandbox? Ndimi nee-MD5s
NgoMvulo, Septemba 28, 2020 NgoLwesibini, Septemba 29, 2020 UDavid Finkelstein
Isibhengezo sika-Apple sikaJuni 2020 sokuba i-IDFA iya kuba yinto yokungena kubathengi ngo-Septemba 14 ukukhutshwa kuka-Septemba beziva ngathi ityali irhuqiwe phantsi kwe-80 yezigidigidi zentengiso, ithumela abathengisi ukuba benze into elungileyo elandelayo. Sele kudlule iinyanga ezimbini, kwaye sisaqala iintloko. Ngokuhlehliswa okufuneka nje kude kube ngo-2021, thina njengeshishini kufuneka sisebenzise eli xesha ngokufanelekileyo ukufumana umgangatho omtsha wegolide